Tababare Unai Emery oo shaaca ka qaaday suurtogalnimada ay ku fasixi karaan qaar ka mid ah xiddigaha Arsenal – Gool FM
(London) 10 Agoosto 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Unai Emery ayaa wuxuu shaaca ka qaaday suurtogalnimada ay ku fasixi karaan qaar ka mid xiddigaha ku sugan Emirates Stadium, inkastoo uu xirmay suuqa kala iibsiga ee England Khamiistii lasoo dhaafay.
Arsenal ayaa ka sameysay suuqan kala iibsiga ee xagaaga dhaqdhaqaaq aad u fiican, kaddib markii ay la soo wareegeen dhamaan xiddigaha kala ah Dani Ceballos, Kieran Tierney, David Luiz lagu daray Nicolas Pépé, kaasoo heshiis qaali ah kaga soo dhaqaaqay kooxda Lille.
Yeelkadeeda, daafaca reer Germany ee Shkodran Mustafi ayaa ka mid ah xiddigaha ugu cad cad ee u sharaxan inay ka tagaan kooxda Arsenal xitaa markii uu xirmay suuqa kala iibsiga xagaaga ee dalka England, Gunners ayaana wali awooda inay ka iibiso qaar ka mid ah xiddigaheeda kooxaha banaanka ka ah England.
Hadaba macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Unai Emery oo ka hadlay mustaqbalka Shkodran Mustafi ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan la hadlay isaga dhamaadka xili ciyaareedkii hore, iyo bilowga xilli ciyaareedka cusub, waxaana u sheegay inay macquul tahay inuu kooxda ka tago, shaki kama qabo inuu yahay ciyaaryahan fiican”.
“Waxaan dooneynay inaan noqono koox ku tartamaysa boosaska oo dhan, ciyaartoyda qaarna wax yar ayey ciyaari doonaan, sababa la xiriira saxiixyada cusub ee aan kooxda ku xoojinay, sidaas darteed wey bixi karaan haddii ay doonayaan”.
“Haddii aan ka hadlo arrinta Shkodran Mustafi, wali wuu naga tirsan yahay, haddii ay jirto baahi loo qabo inuu qeyb naga noqdo waxaan ku kalsoonahay inuu qaban doono shaqo aad u fiican”.
Marcelo oo ka warbixiyay sababtii uu iskaga diiday dalab kaga yimid Juventus, si uu markale ula midoobo Ronaldo